Ny Teny Nalaza Nandritra Ny Taona 2016 Lasa Teo? ‘Demokrasia Saosisy’. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2017 5:29 GMT
‘Demokrasia saosisy’ no nahazo ny lokan'ny Oz Teny nalaza nandritra ny taona avy amin'ny Foiben'ny Rakibolana Nasionaly Aostraliana (ANDC)
Tenifototra niparitaka tao amin'ny twitter avy amin'ny fidabohan'ny tranonkala nasionaly fanisàm-bahoaka tamin'ny Aogostra 2016 ny #CensusFail. Hazavaina amin'ny antsipirihany ato ireo mpifaninana ireo sy ny hafa.
(Saosisy) ‘taolana’ dia fiteny manokan'ny Aostraliana, toy izany koa ny ‘saosisy mangorovitsika’ (tono hena ho fanangonam-bola). Samy hita ao amin'ny andiany farany amin'ny Rakibolana Nasionaly Aostraliana nivoaka tamin'ny Aogostra 2016 ireo teny roa ireo.